I-FAQs -I-Danyang NQ yezeMidlalo kunye noQeqesho Co., Ltd.
Ndingalufumana nini ikowuteshini yeempahla?
Ngesiqhelo, siya kucaphula kuwe kwiiyure ezingama-24 emva kokuba sifumene imibuzo yakho. Ukuba ungxamile, pls unxibelelane nathi ngonxibelelwano lwe-Intanethi, umthengisi okanye umnxeba!
Ngaba ixabiso lemveliso libandakanya ilogo? Ndingayenza njani ilogo yam yesiko kunye nokupakisha?
Ixabiso lemveliso elidwelisiweyo alibandakanyi ilogo, imveliso ihlala isebenzisa ukupakisha kwebhegi eninzi. Ungaqhagamshelana neentengiso zethu ngexabiso elithile ukuba ufuna ilogo okanye ukuphakheja kwesiko.
Ngaba singafumana isampulu enye yokuqinisekisa ngaphambi komyalelo?
Ewe, ayizukuba yingxaki ukufumana isampulu enye yokuqinisekisa ngaphambi kokuba sobabini sivume ngexabiso! !
Ngaba unokwenza uyilo lwethu?
Ewe, akukho ngxaki! Usinika nje imifanekiso ilungile, abayili bethu baya kuyenza imifanekiso yezobugcisa yokujonga kwakho ngokwemifanekiso yakho!
Njani ngokwemigaqo yentlawulo?
T / T, umanyano lwaseNtshona, iPaypal, iMali yeGrama, njalo njalo.